မြင်တွေ့ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းလား။ | Seeing or Believing? | Real Conversion
မြင်တွေ့ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းလား။
ဖေဖော်ဝါရီလ ( ၄ ) ရက်၊ သခင်ဘုရား၏နေ့ ညနေပိုင်းတွင်
ဟောကြားသော Dr. R. L. Hymers, Jr.၏
“ထိုသခင်ကို သင်တို့သည် မမြင်ဘူးသော်လည်း ချစ်ကြ၏။ ယခု မှာလည်း မမြင်ဘဲလျက်၊ ယုံကြည်သောအားဖြင့် ဘုန်းအသရေ နှင့်စပ်ဆိုင်သော၊ ပြော၍မမှီနိုင်သောရွှင်လန်းခြင်းစိတ်နှင့်ဝမ်း မြောက်ကြသည်ဖြစ်၍၊ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူ သော ယုံကြည်ခြင်း၏အကျိုးကို ခံရကြ၏။” (၁ ပေ ၁း ၈၊ ၉ )
ပေတရုသည် ယေရှုကို လုံး၀ မမြင်ဖူးသောလူတို့အား မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူတို့က ယေရှုမြေကြီးပေါ်တွင် ရှိခဲ့စဉ်ခါ လုံးဝမမြင်ဖူးခဲ့ကြပေ။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် သူ့အားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်ခဲ့ကြသည်။ လူများစွာတို့က ယေရှုမြေကြီးပေါ်မှာ ရှိစဉ်တွင် မြင်တွေ့ခဲ့ကြသည်။ သို့သော် သူတို့သည္ ကယ်တင်ခြင်းသို့မရောက်ကြပါ။ Spurgeon က “မြင်တွေ့ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်၊ ယုံကြည်ခြင်းသည် မြင်တွေ့ခြင်းဖြစ်သည်” ဟူ သော ပြောဆိုချက်သည် မှန်ကန်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ၎င်းမှာ Spurgeon ၏တရားဒေသနာ ၏ ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းကို အခြေပြုကျမ်းတွင် အခြေပြုထားသည်။ Spurgeon ၏ တရားဒေသနာကို သင့်အတွက် တူညီစေမည်။
၁။	ပထမအချက်၊ မြင်တွေ့ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
သင်သည် ထိုအကြောင်းကိုသိရှိရန် သမ္မာကျမ်းစာအကြောင်း များစွာ သိရှိရန်မလို အပ်ပါ။ သူတို့အားလုံးသည် ခရစ်ဝင်ကျမ်းများအားဖြင့် ယေရှုကိုမြင်တွေ့ခဲ့ကြသူများဖြစ်ခဲ့ကြ ပါသည်။ သူတို့သည် ယေရှုကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြသော်လည်း ယုံကြည်ခြင်းမရှိခဲ့ကြပါ။ ယုဒရှာကာ ရုတ်သည် ယေရှုတပည့်တော်ထဲက တစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် သူသည် ယေရှုကို မယုံ ကြည်ပါ။ ယုဒသည် ယေရှုနောက်တော်သို့ သုံးနှစ်တိုင်တိုင် နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ ယေရှုနှင့်အသက်ရှင်ခဲ့သည်။ ယေရှုနှင့်အတူ စားသောက်ခဲ့သည်။ ယေရှုနာမ၌ နတ်ဆိုးများ ကို နှင်ထုတ်ခဲ့သည်။ ယေရှုအကြောင်းကို ဟောပြောခဲ့သည်။ ယေရှုသည် သူနှင့်လုံး၀ ရင်းနှီး ကျွမ်းဝင်သည်ကို သိသည်။ ယေရှုက ယုဒကို အဆွေဟုပင်ခေါ်သည်။ သို့သော် ယုဒသည် ယေရှုကို မယုံကြည်ပါ။ ထို့ကြောင့်သာလျှင် သူသည် ယေရှုကို အသပြာသုံးဆယ်ဖြင့် သစ္စာ ဖောက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်သောကြောင့် သူသည် ထွက်သွားပြီး မိမိကိုယ်ကို ကြိုးဆွဲသေသည်။ ငရဲသို့သွားခဲ့သည်။ အခြားတပည့်တော်များက ပိုကောင်းသည်တော့မဟုတ်ပါ။ သူတို့လည်း ယေရှုကို မယုံကြည်ကြပါ။ သူက ယေရုရှလင်သွားပြီး အသေခံမည့်အကြောင်း သူတို့ကို ပြော ပြခဲ့ပါသည်။ “သူတို့သည် ဤအမှုအရာတစ်စုံတစ်ခုကိုမျှ နားမလည်ကြပါ။ မိန့်တော်မူသော အရာများကိုလည်း မသိကြပါ။” ( လုကာ ၁၈း ၃၄ ) သူတို့အပေါ်သို့ မှုတ်သွင်းတော်မမူမှီတိုင် အောင် ယေရှုကို ယုံကြည်ကြခြင်းမရှိကြတော့ပါ။ ( ယောဟန် ၂၀း ၂၂ ) တပည့်တော်သော မတ်က ထိုအမှုအရာမတိုင်မှီတွင် ယေရှုကို မယုံကြည်ပါ။ သူသည် ယေရှုနှင့်အတူ သုံးနှစ်သုံး မိုးနေထိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် သူ့ကို မယုံကြည်ခဲ့ကြပါ။ ဘုရင်ဟေရုဒ်သည် သူ့ကိုမြင်သော် လည်း မယုံကြည်ပါ။ ပိလတ်သည် သူ့ကိုမြင်သော်လည်း မယုံကြည်ပါ။ ဖာရိရှဲများက သူပြု သောနိမိတ်များကို မြင်ကြသော်လည်း မယုံကြည်ကြပါ။ ဇဒ္ဒုကဲများနှင့်ဟေရုဒ်အပေါင်းအပါတို့ ကလည်း သူနှင့်အတူ စကားပြောကြသော်လည်း မယုံကြည်ကြပါ။ လူအုပ်ကြီးကို ယေရှုက ကျွေးမွေးသော်လည်း သူတို့သည် မယုံကြည်ကြပါ။ သူတို့သည် နိတ်မိတ်လက္ခဏာကို မြင် တွေ့ခဲ့ကြသော်လည်း အများစုက မယုံကြည်ကြပါ။ မြေကြီးပေါ်တွင် ရှိနေစဉ်ခါ သူ့ကို ယုံ ကြည်မည့်သူတစ်ဦးဦးရှိနေဖို့ ခက်ခဲမိသည်။ လုံး၀ ခက်ခဲသည်။ ၎င်းမှာ အံ့ဩစရာကောင်း သည့်အချက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအံ့ဩစရာအကြောင်းကို တမန်တော်ယောဟန်က ဤသို့ရေး သားပါသည်။ “သူသည် မိမိလူမျိုးတို့ထံလာသော်လည်း မိမိလူမျိုးတို့သည် လက်မခံကြ။” ( ယော ၁း ၁၁ ) လက်တစ်ဆုပ်စာလူတို့ကသာလျှင် မြေကြီးပေါ်တွင် သူတို့တွေ့မြင်သော ယေရှုကို ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
ဤအချက်မှစတင်၍ “မြင်တွေ့ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်း” မဟုတ်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ သိကြပါသည်။ သို့သော် ယနေ့ညတွင်ရှိကြသော သင်တို့တွင် အချို့တို့သည် မြင်တွေ့ခွင့်ရှိ လျှင် ယုံကြည်လိမ့်မည်ဟု ထင်ကြသည်။ သင်တို့က ထိုအချက်ကို လက်မခံကြသော်လည်း မှန်ကန်မှုရှိပါသည်။ ထိုအကြောင်းကြောင့် သင်သည် ယေရှုစစ်မှန်ကြောင်းကို သက်သေထူလို သည့် အရာ တစ်စုံတစ်ခုကို “ခံစား” ရလိမ့်မည်။ သင်တို့သည် “ခံစားချက်” ကို ရှာဖွေကြပါ သည်။ သို့မဟုတ် ကတိတော်ရှိသော ကျမ်းပိုဒ်ကို ရှာဖွေနေကြပါသည်။ သင်တို့သည် ခံစား ချက်ကို နားလည်နိုင်ကြသည်။ သင်တို့သည် သမ္မာကျမ်းစာ ကတိတော်တစ်ခုကိုလည်း တွေ့ မြင်နိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် ယေရှုကိုတော့မမြင်နိုင်ပါ။ ၎င်းမှာ သူ့ကို မယုံကြည်ခြင်းအတွက် ဆင်ခြေသာဖြစ်ပါသည်။ ယေရှုကို မယုံကြည်ခြင်းအတွက် ဆင်ခြေသာဖြစ်ပါသည်။ မယုံ ကြည်ခြင်းအတွက် ဆင်ခြေသာဖြစ်ပါသည်။ ကယ်တင်ခြင်းမရရှိခြင်းအတွက် ဆင်ခြေသာဖြစ် ပါသည်။ သို့ရာတွင် ကျွန်ုပ်ပြောဆိုသောအရာမှာ “မြင်တွေ့ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ္ ပါ။” တစ်ခုခုကိုခံစားရခြင်းသည်လည်း ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ္ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာကတိတော်များ ကို ထပ်ခါရွက်ဆိုခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ အံ့ဩဘွယ်ရာများကို မြင်တွေ့ခြင်းသည် လည်း ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဖော်ပြသော မယုံကြည်သူများအားလုံးက ကျမ်းပိုဒ်များ ကို သိကြပါသည်။ သူတို့အားလုံးက သူ့ကို မြင်တွေ့ခဲ့ကြသည်။ သူတို့အားလုံးက နိမိတ်ကို လည်း မြင်ခဲ့ကြပါသည်။ သို့သော် သူ့ကို မယုံကြည်ကြပေ။ သူတို့အားလုံးက သေကြသည်။ ငရဲသို့သွားကြသည်။ အကြောင်းမှာ သူတို့သည် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ တွေ့မြင်ခဲ့ကြသော် လည်း ယုံကြည်ခြင်းမရှိကြပါ။
ပရောဖက်ဟေရှာယက ယေရှုအကြောင်းကိုပြောသည်။ ဟေရှာယက “သူသည် လူ တို့၏ပြစ်တင်ခြင်းနှင့်ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံရသည်” ( ဟေရှာယ ၅၃း ၃ ) ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ Barnes က ဤသို့မှတ်စုရေးသားထားပါသည်။
သူသည် ပြစ်တင်ခြင်းခံရသည်။ ကယ်တင်ရှင်ကို ဖာရိရှဲနှင့် ဇဒ္ဒု ကဲများက ငြင်းပယ်ကြသည်။ မြေကြီးပေါ်၌ ၎င်း၏အသက်တာ တွင် ထိုသို့ဖြစ်ပြီး သေခြင်းတွင်လည်း ထိုနည်းအတိုင်းပင်ဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် သူ၏နာမည်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းသည် မထီလေး စားပြုခြင်း၏ အကြောင်းအရာဖြစ်ပါသည်။
လူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည်။ စကားစုသည် အဓိပယ်များစွာ ရှိပြီး ကယ်တင်ရှင်အပေါ် ပြုမူဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ လူ့သ မိုင်းတစ်ခုလုံးတွင် စကားသုံးခွင်းဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။ “လူတို့ ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသည်” ဟူသောနာမက ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာသမိုင်း ကြောင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြသည်။ ယုဒလူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ချမ်း သာသူများ၏ငြင်းပယ်ခြင်း၊ ပညာရှိတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်း၊ အဆင့်အ တန်း၊ အသက်အရွယ်၊ ရာထူးငှါနန္တရရှိသူတို့၏ငြင်းပယ်ခြင်းကို ခံ ရပါသည်။
သူသည် မထီလေးစားခြင်းကို ခံရသည်။ လူတို့၏မထီလေးစားပြု မူခြင်းကို ၎င်း၏သွန်သင်ချက်တွင် အနည်းငယ်မျှပြသထားပြီး လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် အသေသတ်ခြင်းမတိုင်မှီ တစ်ညတွင် ဆက်ဆံမှု၌ တစ်ချို့ ထင်ရှားပါသည်။ လူတို့၏ငြင်းပယ်မှု၊ လူတို့ ၏ပစ်ပယ်ခြင်းထက် ငါတို့သခင်၌ “သိုးငယ်လေးတစ်ကောင်” ထက်များစွာ မရှိတော့ပေ။ သူတို့အထဲ၌ပင်လျှင် “လူများစွာတို့ သည် သူနှင့်အတူပြန်သွားပြီး နောက်ထပ်လမ်းမလျှောက်ကြ တော့ပေ။” လူတစ်ချို့သာလျှင် ညအချိန်၌ သူ့ထံသို့လာကြပါ သည်။ “အုပ်စိုးသူ” အလုံးအရင်းတို့နှင့်လူကြီးလူကောင်းများက သူ့ကို အဖတ်မလုပ်ကြပါ။ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်း၏တမန်တော်များ ကပင်လျှင် “သူ့ကိုစွန့်ပစ်ပြီး ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ကြပါသည်။”
မြေကြီးပေါ်၌ အသက်ရှင်စဉ် ယေရှုကိုမြင်သောသူအားလုံးနီးနီးက သူ့ကို မထီလေးစားပြုပြု သူ့ကို ငြင်းပယ်ကြသည်။ သင်သည် သူတို့နှင့်ကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါသလား။ သင်သည် မ ပြောင်းလဲသေးလျှင် သင်သည် သူတို့နှင့်တပုံစံတည်းဖြစ်နေပါသည်။ သင်သည် သူ့ကို မထီ လေးစားလုပ်ပြီး ငြင်းပယ်ကြသည်။ သင်သည် ကိုယ့်မျက်နှာကို သူ့ထံမှ ဖုံးကွယ်ထားသည်။ သင်သည် သူ့ကိုမြေကြီးပေါ်၌ တွေ့မြင်ခဲ့ကြသည့်အချိန်တွင် ငြင်းပယ်သောသူတို့နှင့်တစ်ပုံစံ တည်းဖြစ်နေပါသည်။ သူတို့သည် မြင်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့သည် အသံကိုကြားခဲ့ကြရသည်။ သို့ ရာတွင် မယုံကြည်ကြပေ။ မြင်တွေ့ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ယုံကြည်ခြင်းသည် မြင်တွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“ထိုသခင်ကို သင်တို့သည် မမြင်ဘူးသော်လည်း ချစ်ကြ၏။ ယခု မှာလည်း မမြင်ဘဲလျက်၊ ယုံကြည်သောအားဖြင့် ဘုန်းအသရေ နှင့်စပ်ဆိုင်သော၊ ပြော၍မမှီနိုင်သောရွှင်လန်းခြင်းစိတ်နှင့်ဝမ်း မြောက်ကြသည်ဖြစ်၍၊ စိတ်ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူ သော ယုံကြည်ခြင်း၏အကျိုးကို ခံရကြ၏။” ( ၁ ပေ ၁း ၈၊ ၉ )
ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောအခြေပြုကျမ်းတွင် ဖော်ပြထားသည့် ပေတရုတရားဟော သောလူတို့သည် ယေရှုကို မြေကြီးပေါ်တွင် လုံး၀ မြင်တွေ့ဖူးခြင်းမရှိကြပေ။ သို့သော် သူတို့ သည် ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားကြလျက် ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ကြသည်။ သူတို့သည် မမြင်ဖူးသော်လည်း၊ သူ့အသံမကြားဖူးသော်လည်း၊ လုံးဝမတို့ထိဖူးသော်လည်း အဘယ့် ကြောင့် ယုံကြည်လက်ခံခဲ့ကြသနည်း။ ပြုပြင်ရေးသမားကြီး ကယ်လ်ဗင်က အဖြေပေးလိုက်ပါ သည်။ ကယ်လ်ဗင်းက “သခင်ဘုရားက သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လမ်းပြပြီး ပုံ သွင်းလုပ်ဆောင်ထားခြင်းမရှိလျှင် အဘယ်သူမျှ မိမိအသိဥာဏ်ပညာဖြင့် မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ” ဟု ဆိုပါသည်။
ထိုဝိညာဉ်တော်သည် သင့်အား ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်နိုင်သော ယုံကြည်ခြင်းကို သင့်အားပေးတော်မူသည်။ ယခုတွင် သင်သည် ယေရှုကိုမမြင်နိုင်သော်လည်း ယုံကြည်နိုင်ပါ သည်။ သင်သည် ဇာတိထိတွေ့မှုကိုမခံစားနိုင်သော်လည်း ယေရှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုတွင် သန့်ရှင်း သောဝိညာဉ်တော်က ခေါ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။
ယေရှုနှင့်ပထမဆုံးဆက်နွယ်မှုမှာ မေတ္တာတရားပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ု္ပ်တို့၏အခြေပြု ကျမ်းက “မမြင်ရသော်လည်း ချစ်သည်” ဟုဆိုသည်။ “သင်သည် သူ့ကို မမြင်ရသော်လည်း သူ့ကိုချစ်သည်။” ယေရှု၏မေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့ထံသို့ နည်းလမ်းပေါင်းများစွာဖြင့် ရောက် လာနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ဘုရားကျောင်းသို့သွားခါစတွင် အမျိုးများက ဟားတိုက်လုပ်ကြ ပါသည်။ သူတို့သည် ယေရှုကိုလည်း စော်ကားပြစ်တင်ကြပါသည်။
သူတို့က “သင်သည် သူ့ကို မည်သို့ယုံကြည်နိုင်မည်နည်း။ သူသည့် သင့်အဖို့ အ ဘယ်အရာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သနည်း” ဟုဆိုကြသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် ယေရှုကို ဟား တိုက်လုပ်လေလေ၊ သူ့ကို ငါချစ်လေလေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တက်ရောက်သောအသင်းတော် တွင်လည်း ဆိုးသွင်းမိုက်မဲသောကလေးသူငယ်များရှိကြသည်။ သူတို့သည် သူ့မယ်တော်ကို လည်း အပျိုကညာဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ညစ်ညမ်းသောစကားကိုဆိုခဲ့ကြသည်။ သူမသည် တရားမဝင်ကလေးမွေးဖွါးခြင်းဟုပင် ဆိုကြသည်။ သူတို့သည် သူ့ကို ရယ်မောကြပါသည်။ သို့ရာတွင် သူတို့သည် ယေရှုကို ဟားတိုက်ပျက်ရယ်ပြုလေလေ၊ သူ့ကို ငါချစ်လေလေဖြစ်ပါ သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ထမြောက်ရာနေ့တွင် သူ့ကို ပို၍နှစ် သက်သဘောကျမိသည်။ သူသည် လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင် ဒုက္ခခံစားရခြင်းကြောင့် ချစ်မိပါ သည်။ ခြေ၊ နှင့်လက်ဖဝါးတွင် ထိုးသွင်းထားသော သံမှိုများကို မုန်းတီးမိပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကြီးစွာသောအမှုကို သူ့အပေါ် အဘယ့်ကြောင့်လုပ်ဆောင်ကြသည်ကို ကျွန်ုပ်မသိပါ။ သို့ရာ တွင် သူ့ကို သနားလျက် ဝမ်းနည်းမိပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် အထီးကျန်သောလူငယ်လေးတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်အား လုံခြုံမှု၊ ပျော်ရွှင်မှုကိုပေးမည့် မိဘများလည်း မရှိတော့ပါ။ ယေရှုသည်လည်း နှိမ့်သိမ့်မည့်သူ၊ ချစ်မည့် သူ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းမရှိဘဲ အထီးကျန်ဆန်လွန်းသည်ဟု ထင်မိသည်။ “အဘယ်သူမျှ မချစ်သော်လည်း၊ ယေရှုက သင့်ကိုချစ်သည်။” ကျွန်ုပ်၏စိတ်ဝိညာဉ်ကိုသိမ်းပိုက်သူသည် ၎င်း ၏ချစ်မေတ္တာပင်ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်းရရှိသောနေ့ရက်တွင် သူတို့သည် ချားလ် ဝယ်စလီ၏သီချင်းကို သီဆိုခဲ့ကြသည်။ စာပိုဒ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းကို စိတ်နှလုံးကြေကွဲစေသော စကားလုံးများဖြင့် အဆုံးသတ်ထားပါသည်။ “အံ့ဘွယ်မေတ္တာ၊ ဘယ်မျှကြီးမြတ်၊ ကျွန်ုပ်ဘုရား တို့တွက်သေခံ။” “အံ့ဘွယ်မေတ္တာ၊ ဘယ်မျှကြီးမြတ်၊ ကျွန်ုပ်ဘုရား တို့တွက်သေခံ။”
ယေရှုသည် လူ့ဇာတိခံယူလာသော ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ သူတို့သည် ကျွန်ုပ်ကိုးကွယ် သောဘုရားအား ကားတိုင်ပေါ်တွင် သံမှိုဖြင့် ရိုက်နှက်ကြပါသည်။ “အံ့ဘွယ်မေတ္တာ။” ထိုအ ကြောင်းက ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးကို ကျိုးပဲ့စေပါသည်။ သူ့ကို ကျွန်ုပ်ကိုးစားသည်။ ကျွန်ုပ်အတွက် သူ့မေတ္တာအားဖြင့် သူ့ကိုချစ်သောအားဖြင့်သာ ရောက်ရှိလာနိုင်ပါသည်။
ဒီမှာရှိသောသူ တစ်ဦးဦးက John Cagan ကို မိန်းမလျာဟု အဘယ်သူမျှ ခေါ်မည်မ ဟုတ်ပါ။ John ၏ ခွန်အားနှင့်ပြည့်စုံသော ဂုဏ်အင်္ဂါကို လေးစားရပေမည်။ John သည် ခရစ် တော်ကို ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းသည့်အခန်း၌ ကျွန်ုပ်ပြောဆိုသမျှ ဘယ်အရာကမျှ သူ့ကို တွန်းအားမပေးပါ။ သူက “ယေရှုကို လက်မြှောက်ကိုအရှုံးပေးမည့်အတွေးအခေါ်သည် အလွန် စိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ ယေရှုသည် သူ့အသက်ကို ကျွန်ုပ်အတွက်ပေးထားသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ရန်သူအဖြစ်ရှိစဉ်ခါ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်ကိုယ်စား အသေခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် သူ့ကို အလျော့မပေးပါ။ အတွေးအခေါ်က ကျွန်ုပ်ကို ကျိုးပဲ့စေပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို ရေရှည် ထိန်းမထားနိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်ယေရှုကို အလိုရှိလာသည်။ ထိုခဏချင်းတွင် သူ့ကိုအလျော့ ပေးပြီး ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် ယေရှုထံသို့လာသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ခံစားချက်ကို အလိုမရှိပါ။ ကျွန်ုပ် က ခရစ်တော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။ မထိုက်တန်သောအပြစ်သားကို ယေရှုက အဘယ်မျှ လောက်ချစ်၍ ခွင့်လွှတ်တော်မူသနည်း။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်အတွက် မိမိအသက်ကိုပေး သည်။ ထိုအရာကို သူ့ကိုပေးလိုက်သည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်၏အမုန်း၊ အမျက်ဒေါသကို ယူ ဆောင်ပြီး မေတ္တာကိုပြန်ပေးသည်” ဟုဆိုသည်။
Spurgeon က John Cagan ကို လုံးဝမတွေ့မမြင်ဖူးခဲ့ပါ။ သို့ရာတွင် သူသည် John ကို သိသကဲ့သို့ ရေးသားခဲ့ပါသည်။ Spurgeon က “နောက်ဆုံးတွင် မြင်တွေ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မြင်တွေ့ခြင်းသည် အပြင်ပိုင်းသာဖြစ်ပေမည်။ ယေရှုအကြောင်းတွေးတောခြင်း၊ နားလည် ခြင်း၊ အကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းမှာ ဆက်နွယ်မှု၏အဓိက အချက်ဖြစ်ပါ သည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်ကိုချစ်ခြင်းသည် ပေါင်းစည်းခြင်း၏စစ်မှန်သောနည်းလမ်း၊ ထိ တွေ့ခြင်းထက် ခိုင်မာသောချည်နှောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာက ကယ်တင်ရှင်ကို စိတ် နှလုံးထဲ၌ စစ်မှန်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ခရစ်တော်နှင့်သင့်ကြား၌ ဆက်နွယ်စေသောချစ်ခြင်း မေတ္တာသည် အခြားခံစားချက်၏ဆက်နွယ်မှုတစ်ခုခုထက် ပိုမို၍ စစ်မှန်နိုင်ပါသည်။” “သင် သည် သူ့ကို တွေ့မြင်ဖူးခြင်းမရှိသော်လည်း သူ့ကိုချစ်မိသည်။”
အခြေပြုကျမ်းက ယေရှုခရစ်နှင့်အခြားဆက်နွယ်မှုအချက်တစ်ခုကို ပေးထားပါသည်။ “သင်သည် မမြင်တွေ့ဖူးသော်လည်း သူ့ကို ယုံကြည်သည်။” “သို့သော် သင်သည် ယုံကြည် ပါသည်။” သင်သည် မမြင်တွေ့ရဘဲ ယေရှုကိုယုံကြည်နိုင်သည်ဟူသောအချက်က ကျွန်ုပ်တို့ ကို သတိရစေပါသည်။ “သူ့ကိုမမြင်တွေ့ရသော်လည်း၊ သင်သည် ယုံကြည်သည်။ ဝမ်း မြောက်ခြင်းရှိသည်။” သို့သော် ယုံကြည်မှုရှိသည်။ ပေတရု လိပ်မူရေးသားထားသောလူများ သည် ယေရှုကို သိရှိခြင်းလည်း မရှိကြပါ။ သူတို့သည် ယေရှုကို မခံစားခဲ့ပါ။ သူ့အသံကို လည်း မကြားဖူးကြပါ။ သို့သော် သူတို့သည် သူ့ကို သိခဲ့ကြပါသည်။ “သူ့ကိုမတွေ့ရသော် လည်း ယုံကြည်သည်။ ဝမ်းမြောက်သည်။” “မမြင်တွေ့ရသော်လည်း သူ့ကို သင်ယုံကြည်ပါ သည်။”
Helen Keller သည် မွေးရာပါ လုံး၀ မျက်စိကန်းပြီး နားလည်းကန်းခဲ့သည်။ Anne Sullivan ဆိုသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးသည် Helen Keller အား စကားပြောနည်းကို သင်ကြား ပေးခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသည့် အကြောင်းအရာသာဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ငယ်ရွာစဉ်ခါ Helen Keller သည် ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွင် မိန့်ခွန်းပြောသည်ဟု ကြားဖူးပါသည်။ သူသည် မွေးကတည်းက မျက်စိမမြင် နားမကြားဖြစ်သော်လည်း Helen Keller သည် ယေရှုကို ယုံ ကြည်ခဲ့ပါသည်။ သင်သည်လည်း သူ့ကို မမြင်ရ သို့မဟုတ် မကြားရသော်လည်း ယေရှုကို ယုံကြည်နိုင်ပါသည်။
ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းက သူနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။ ချစ်မေတ္တာနှင့်ယုံ ကြည်ခြင်းတို့သည် ယေရှုနှင့်ဆက်နွယ်မှုအတွက် သော့ချက်များဖြစ်ကြပါသည်။ မေတ္တာနှင့်ယုံ ကြည်ခြင်းသည် ကယ်တင်ရှင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကို ပေါင်းစည်းစေပါသည်။ “မမြင်ရသောသူကို သင် ချစ်သည်။ မမြင်ရသောသူကို သင်ယုံကြည်သည်။ သင်ဝမ်းမြောက်သည်။” “သင်မမြင်ရ သော်လည်း သူ့ကိုယုံကြည်သည်။ သူ၌ဝမ်းမြောက်သည်။”
ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်၏ တယောဆရာ Emi Zabalaga စကားကို နားထောင်ပါ။ သူ သည် ဥာဏ်ရှိသောမိန်းမဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် သူမပြောစကားကို ယုံကြည်လက်ခံနိုင်ပါ သည်။
ကျွန်ုပ်သည် ခရစ်တော်ကို မကိုးစားပါ။ “ယေရှု” ဟူသည်မှာ စကားတစ်လုံးသာဖြစ်သည်။ ဩဝါဒတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သို့မ ဟုတ် တည်ရှိသည်ဟု ကျွန်ုပ်သိသောသူတစ်ဦးမျှသာဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အဝေးတွင်တည်ရှိနေသည်။ ခရစ်တော်အတွက် ရုန်း ကန်နေမည့်အစား၊ ခံစားချက်ကိုသာရှာဖွေနေမည်။ သို့မဟုတ် အတွေ့အကြုံအချို့ကိုသာရှာဖွေမည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်ညတွင် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ္အတွက် အသေ ခံကြောင်းကို သတိပြုမိခဲ့သည်။ ထိုညတွင် ကျွန်ုပ်သည် ဂေသရှေ မာန်ဥယျာဉ်၌ ခံစားနေခဲ့ရသော ငိုကြွေးခြင်း၊ မြည်တမ်းခြင်းဟူ သောအပြစ်၏သောကခံစားရသည်ကို တွေးတောမိသည်။ (စိတ် နှလုံးထဲ၌) ကျွန်ုပ္ အပြစ်ကြောင့် ယေရှုအသေခံသည်ကို မြင် ယောင်မိသည်။ သွန်းလောင်းသောအသွေးတော်အကြောင်း စဉ်း စားမိလျှင်၊ သူသည် နံရိုးတွင် လှံသံဖြင့် ထိုးသွင်းခြင်းခံရပါသည်။ သို့သော် သူ့ကို ကျွန်ုပ် မယုံကြည်နိုင်သေးပါ။ သေချာသည့်ခံစား ချက်တစ်ခုအတွက် ကျွန်ုပ်၏လိုအပ်ချက်ကိုသာ တွယ်ကပ်နေ သေးသည်။
ဒေါက်တာ Hymers သည် ခရစ်တော်၏မေတ္တာနှင့်ပတ်သက် ပြီး ရှောလမုန်သီချင်းကို စတင်ဟောပြောခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နား ထောင်သည်အတိုင်း ခရစ်တော်သည် ချစ်ဖို့ ပိုပိုကောင်းလာပါ သည်။ သူ့ကို စတင်ပြီး လိုချင်တောင့်တလာသည်။ “ငါချစ်သော နှမ၊ ငါ၏မိန်းမလှ၊ ထ၍လာခဲ့ပါ” (သီချင်း ၂း ၁၀) ဟူသော ကျမ်း ပိုဒ်ကို ကြားခဲ့ရသည်။ ခရစ်တော်သည် ကျွန်ုပ်ကိုပြောနေသည်၊ သူ့ထံသို့သွားရန် ကျွန်ုပ်ကိုခေါ်နေသည်ဟု ခံစားလာသည်။
ကျွန်ုပ်တွေ့ကြုံသမျှသောအတွေ့အကြုံအားလုံးသည် ဘ၀ ရဲ့စိတ်ပျက်စရာ၊ မျှော်လင့်ချက်မဲ့စရာ၊ လောကရဲ့အထီးကျန်ဆန် မှုများ၊ အပြစ်ရဲ့နှိပ်စက်မှုများသည် ဘုရားသခင်၏မေတ္တာကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည်ကိုသိသည်။ ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်၏အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်သည်ကိုလည်း သိပါသည်။
[ တရားဒေသနာပြီးနောက်တွင် ဒေါက်တာ Hymers ကိုတွေ့ ရန် ] ကျွန်ုပ်သွားခဲ့သည်။ အပြစ်တံတိုင်းသည် ကျွန်ုပ်ရှေ့တွင် ကာ ဆီးထားပါသည်။ ထိုအပြစ်တို့မှာ စိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်း၊ စိတ်နှလုံး ၏မကောင်းသောအကြံအစည်၊ ယေရှုကိုအဆုံးမဲ့ငြင်းပယ်ခြင်း တို့ ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ် မသယ်ဆောင်နိုင်တော့ပါ။ ယေရှုကို ပိုင်ဆိုင္ရမည္။ အသွေးတော်ကို ရရှိရမည္။ ကျွန်ုပ်ဒူးထောက်ဆု တောင်းလိုက်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ယေရှုကို ကားစင်ပေါ်ထပ်၍ တင်နေမည့်အစား၊ အခြားသော မှားယွင်းသည့်ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် အမှားလုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် မိမိကိုယ်ကိုရှုမြင် ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့လျက်၊ ကျွန်ုပ်ရဲ့ခံစားချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း၊ သို့မ ဟုတ် အရင်ကလုပ်ဆောင်သကဲ့သို့ အမှောင်ထဲတွင် အုပ်စုဖွဲ့ လှုပ်ရှားခြင်းတို့လုပ်ဆောင်နေမည့်အစား ခရစ်တော်ကို ယုံကြည် ခြင်းဖြင့်သာ ကြည့်ရှုပါသည်။ သူသည် မြတ်သောအသွေးတော် အားဖြင့် ကျွန်ုပ်အပြစ်များကို ဆေးကြောပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏လေး သောဝန်ကိုလည်း ဆောင်ယူပေးခဲ့ပါသည်။ သူသည် ကျွန်ုပ်ရဲ့ အပြစ်ရှိသမျှကို ခွင့်လွှတ်တော်မူခဲ့ပါသည်။
သူသည် ယခုတွင် ကျွန်ုပ်၏သူရဲကောင်း၊ ကယ်တင်ရှင်နှင့် သခင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ အကူအညီ၊ ခွန်အား၊ နှင့်အကာအကွယ် တောင်းခံဖို့ ယေရှုထံသို့ အကြိမ်များစွာသွားခဲ့ပါသည်။ တေးသီ ချင်းတွင်လာသကဲ့သို့ “သနားခြင်းသည် ကျွန်ုပ်ကိုပြန်လည်ရေး မှတ်သည်၊/ သနားခြင်းသည် ကျွန်ုပ်အသက်တာကို ပြန်၍ရေးမှတ် သည်/ အပြစ်တရား၌ ကျွန်ုပ်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်/ သို့သော် ယေရှုသည် ကျွန်ုပ်အသက်တာကို ပြန်လည်ရေးမှတ်ခဲ့ပါသည်။” အခြားသူတစ် ဦးဦးသည် ယေရှုအားဖြင့် ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ရောက်သော အခါတွင် ကျွန်ုပ်သည် အလွန်ဝမ်းမြောက်လျက်ရှိပါသည်။ အပြစ် ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားမှလာသော ကျေနပ်ခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းကို ကျွန်ုပ် မဖော်ပြနိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေသောသူအ ပေါင်းတို့သည် ယေရှုထံမှ အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ခံစားကြပေ မည်။ ရှေးက မှေးမှိန်ပြီး အသက်မဲ့သော ဧဝံဂေလိတရားသည် ယခုတွင် ပီတိဖြစ်ဝေဖြာလာပါသည်။ကျွန်ုပ်စိတ်နှလုံးသည် ယေရှု အကြောင်းကိုကြားသောအခါ ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ကျေးဇူးတင်စ ကားဖြင့် ခန်းနားလည်စေသည်။ သားတော်၊ ယေရှုထံသို့နီးစေ သောကြောင့် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ တမန်တော် ပေါလုနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သောအရာမှာ “ပြော၍မကုန်နိုင် သောဆုကျေးဇူးအတွက် ဘုရားသခင်ကို ကျေးဇူးတင်ပါ၏” ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။ ( ၂ ကော ၉း ၁၅ )
ချစ်သောမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း ခရစ်တော်ကို မတွေ့မှီတိုင်အောင် “ဝမ်း မြောက်ခြင်း” အဓိပါယ်ကိုနားမလည်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ခက်ခဲမှုနှင့်ဒုက္ခပြဿနာများစွာကို ကျော် ဖြတ်ခဲ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောလူများအားဖြင့် စိတ်ပျက်ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် အထီးကျန်လျက်ရှိပါသည်။ ဝမ်းနည်းကြေကွဲမှုကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ညတိုင်း၊ ညတိုင်း ကြေကွဲမှုကို ဖြတ်သန်းခဲ့ရပါသည်။ လူ့မိတ်ဆွေမပါဘဲ “ကြမ်းတမ်းသည့်ဝမ်းနည်းမှု” ကို ခံစား ခဲ့ရပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ညနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ပါသည်။ သို့သော် ယေရှုသည် ဝမ်းနည်းဖွယ် ရာ ထိုသို့သောအချိန်တွင် ကျွန်ုပ်ကို ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှ ကျွန်ုပ်ကို လက်မခံဟု ခံ စားရချိန်တွင်လည်း ယေရှုက လက်ခံခဲ့ပါသည်။ “ယုံကြည်ခြင်းဖြင့် စမ်းချောင်း/ စီးဆင်းသော ဒဏ်ရာများက ငြိမ်းစေ/ကယ်တင်သောမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာ/ ကျွန်ုပ်သေ သည့်တိုင်ဖြစ်မည်။/ ကျွန်ုပ်သေသည့်တိုင်ဖြစ်မည်။/ ကျွန်ုပ်သေသည့်တိုင်ဖြစ်မည်။/ ကယ် တင်သောမေတ္တာသည့် ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။/ ကျွန်ုပ်သေသည့်တိုင်ဖြစ်မည်။” သင်သည် ပျောက်သောသူဖြစ်နေသေးလျှင် ဤသီချင်းကောင်းလေးကို သေချာနားထောင်ပါ။
အလင်း၊ အသက်အတွက် တောင်းလျှောက်ရမည်။
အသေခံ၊ အသက်ရှင်၊ စိုးစံလျက် အသနားခံ၊
သူ့စကားလုံး၊ အပြုအမှုအားဖြင့် မေတ္တာထင်ရှား။
( “ယေရှု၌သာ” James Procter, ၁၉၁၃ ).
သင်ကလည်း “ကျွန်ုပ်သိမြင်ပြီ” ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သင်သည် ချစ်မေတ္တာ၊ နှင့်ယုံ ကြည်မႈအကြောင်းကို ပြောဆိုသည်။ သင်က “ငါသည် ခရစ်တော်ကိုမချစ်ပါ” ပြောဆိုပေမည်။ “ကျွန်ုပ်သူ့ကို မယုံကြည်ပါ။ သင်၏အငြင်းပွါးမှုက ကျွန်ုပ်ကို အပြစ်မမြင်စေပါ။”
ထို့နောက် ကျွန်ုပ်သတိပေးရမည်။ သင်သည် မေတ္တာနှင့်ယုံကြည်မႈဟူသော စကား လုံးကို မကြားနိုင်သည့်အချိန်ကာလသည် ရောက်လာပါမည်။ သင့်နားသည့် အေးခဲသေဆုံး နေပေမည်။ သင့်အတွက် အပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းနှင့် ငြိမ်သက်ခြင်းစကား မရှိတော့ပါ။ ထာဝရ မှောင်မိုက်ခြင်းငရဲ၏ မျိုချခြင်းကို ခံရပေမည်။
ယခုနားထောင်လိုက်ပါ။ ဘုရားသခင်က သင့်ကို အမျက်တော်နှင့်တရားစီရင်ခြင်းဖြင့် မိန့်တော်မမူမှီ နားထောင်ပါ။ ထို့အပြင် ဘုရားသခင်က သင့်အား “ငါသည် သင့်ကိုခေါ်သော် လည်း သင်သည် ငြင်းပယ်ထားသည်” ဟုဆိုပါသည်။
သင်ကို ကျွန်ုပ်ပြောနိုင်သောအရာမှာ သင်သည် ခရစ်တော်ကို အမှန်တကယ် ယုံ ကြည်လက်ခံပါရဲ့လား။ ထိုသို့ ယခုလုပ်ဆောင်မည်လား။ ယနေ့ညတွင် အမှန်တကယ် လုပ် ဆောင်မည်လော။ ကျွန်ုပ်က များစွာ မလုပ်ဆောင်နိုင်တော့ပါ။ သင့်ကို ယေရှုကို မယုံကြည် စေနိုင္ပါ။ ယေရှုနှင့်ချန်ရစ်ထားနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ၎င်း၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့် ယေရှုကိုယုံကြည်ကြရန် နှလုံးသားများစွာကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ သင်က ဘုရားသခင်သည် ယေရှုထံသို့နီးစေတော်မူမည်အကြောင်း လူများစွာကြားတွင် ထိုင်လျက်နေပါသည်။ ဘုရား သခင်က ယေရှုနှင့်နီးကပ်ရန် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ သူက ဆွဲခေါ်တော်မမူလျှင် ကျွန်ုပ်က ဘာမျှ မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။ သင်သည် ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ ဘုရားသခင်က ရွေးချယ်ထားခြင်းမဟုတ် လျှင် ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာမရှိပါ။ သင်သည် ရွေးကောက်ထားသောသူထဲက တစ် ဦးမဟုတ်လျှင် ကျွန်ုပ်ဆောင်နိုင်သောအရာလုံးဝမရှိပါ။
သို့ရာတွင် ဘုရားသခင်သည် ယနေ့ညတွင် သင့်စိတ်နှလုံး၌ စကားပြောမည်ဆိုလျှင် ခရစ်တော်ကို ယုံကြည်လက်ခံလိုက်ပါ။ ယခုပင် လက်ခံလိုက်ပါ။ သင်တို့တွင် ယေရှုကို အလို အပ်ဆုံးသောသူသည် ယခုလာ၍ ယေရှုကို ယုံကြည်ကိုးစားပါ။ ကျွန်ုပ်ပြောသမျှသည် ဘုရား သခင်၏ဝိညာဉ်တော်က သင့်စိတ်နှလုံးသားထဲတွင် လက်တွေ့အသုံးချခြင်းမရှိလျှင် အကျိုးရှိ မည်မဟုတ်ပါ။ သင်သည် ပေတရုက အခြေပြုကျမ်းတွင် ဦးတည်ပြောဆိုသောသူများကဲ့သို့ ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားမည်အကြောင်း ဆုတောင်းပါသည်။ John Cagan နှင့် Emi Zabalaga နှင့် သင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသောသူအပေါင်းတို့အပေါ် ဘုရားသခင်ပြုသကဲ့သို့ သင့်အပေါ်လည်း ပြုရန် ဆုတောင်းပဌနာပြုပါ၏။ ယနေ့ညတွင် ကျွန်ုပ်တို့ကြားထဲက ရွေးနှုတ် ခံရသူများကို ဘုရားသခင် ရွေးချယ်ပါစေသော်။ ယေရှုထံသို့လာ၍ ယေရှုကို ကိုးစားပါ။ အသွေးတော်အားဖြင့် ထာဝရကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ ရောက်ပါစေသော်။ အာမင်။
“ယေရှုခရစ်၌"၊ (James Procter, ၁၉၁၃ ရေးစပ်သည်။ )
မြင်တွေ့ခြင်းလား၊ သို့မဟုတ် ယုံကြည်ခြင်းလား အကျဉ်းချုပ်
၁။	ပထမအချက်၊ မြင်တွေ့ခြင်းသည် ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ လုကာ ၁၈း ၃၄၊ ယောဟန် ၂၀း ၂၂၊ ၁း ၁၁၊ ဟေရှာယ ၅၃း ၃။
၂။	ဒုတိယအချက်၊ ယုံကြည်ခြင်းသည် မြင်တွေ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရှောလမုန် သီချင်း ၂း ၁၀၊ ၂ ကော ၉း ၁၅။